ज़नमोर्चा नेपाल फेरि बिभाजित - Everest Uncensored
नेपालि कम्युनिष्ट आन्दोलनका प्रखर दार्शनिक नेता मनिने मोहन बिक्रम सिंहको पार्टि चार चिरामा बिभाजित भएको छ । लामो समयदेखि आन्तरिक बिबाद झेल्दै आइरहेको जनमोर्चा नेपाल औपचारिक रुपमै बिभाजनको संघारमा आइपुगेको हो । नेकपा एकताकेन्द्र र नेकपा मसालबिच 2058 सालमा पार्टि एकिकरण हुदा तिनका चुनाबि मोर्चाहरु क़्रमश सम्युक्त ज़नमोर्चा र रास्ट्रिय ज़नमोर्चा मिलेर ज़नमोर्चा नेपालको निर्माण भएको थियो । माओबादिलाइ हेर्ने द्रिश्टिकोणमा भिन्नता रहेका बखतनै एकिकरण भएको सो पर्टिमा सो अंतर्बिरोध पछिल्लो समयमा चर्किएको थियो । सो अंतर्बिरोध संगसंगै प्रतिगमन बिरोधि आन्दोलनका बखत अन्य छ दलसंग मिलेर जाने वा पार्टिले आफ्नै आन्दोलन गर्ने भन्ने सवालमा पनि पर्टिभित्र बिभाजन देखिएको थियो । पुर्ब एकताकेन्द्र पक्षका अमिक शेरचन र प्रकाशले माओबादिसंग आठ बुदे सहमति गर्न महत्त्वपुर्ण भुमिका ख़ेलेपछि स्पश्टरुपमा पुर्ब मसाल पक्षिय मोहनबिक्रम पक्षले तेसका बिरुद्ध बिद्रोह गरेको थियो । ज़नआन्दोलन सफल भैसकेपछि सरकारमा सामेल हुने वा नहुने भन्ने सवालमा पनि दुइ गुटबिच मतभिन्नता आएको थियो । अमिक शेरचन सरकारमा जाने र परि थापालाइ सँसदिय दलको नेता चुनिएपछि मोहन बिक्रम पक्षले बुटवलमा एक भेला गरि ज़नमोर्चा नेपालका अध्यक्ष अमिक शेरचन र सँसदिय दलका नेता परि थापालाइ हटाएर दुबै जिम्मेवारि चित्र बहादुर क़ेसिलाइ दिने निर्णय गरेको थियो ।
दुबै धारबाट असंतुश्ट पक्षले आफु नै सक्कलि जनमोर्चा नेपाल रहेको दाबि गर्दै काठ्माण्डुमा बुधबारदेखि बिशेष भेला गरिरहेका छन । सम्भबतः भोलिसम्ममा नयाँ नेत्रित्व चयन गर्ने जनाइएको छ । तेस्रो धारका एक नेता भन्छन- मोहन बिक्रम र प्रकाश पक्षले आ आफ्नो पुरानो रास्ट्रिय र सम्युक्त जनमोर्चा नाम लिएर नहिँडि सुखै छैन । अनि असलि जनमोर्चा त हामि नै हुंछौँ । जनमोर्चा नेपालको नेतृत्वमा परि थापा र चित्रबहादुर आलेमगरको नाम प्रमुख रुपमा लिइएको छ ।
सोहि पर्टिबाट असन्तुष्ट अर्को समुहले भने नेकपा 2006 नामक पार्टि गठन गरिसकेको छ ।
भारत पनि बिभजित मोहन बिक्रम पक्षिय जनमोर्चाको पकड मनिएको मूलप्रबह अखिल भारत नेपालि एकता समाज पनि बिभाजित भएको छ । सो पार्टिलाइ आर्थिक स्रोत जुटाउने र नैतिक रुपमा समर्थन गर्ने दर्र्हो संजालको रुपमा रहेको समाज पनि बिभाजित भएपछि मोहन बिक्रम पक्षलाइ ठुलो धक्कलाग्ने बिश्लेशण जानकारहरुको रहेको छ । नवगठित भारत नेपालि एकता समाजका अध्यक्ष प्रेम पौडेल भंछन अहिलेसम्म मोहनबिक्रम समुहले हमिहरुलाइ मागिखाने भाँडो बाहेक केहि बनाएन । अब आउने जनमोर्चा नेपाल्को नेत्रित्वले हामि भारत्म लट्ठि बजार्ने चौकिदारहरुका समस्याहरु पनि सुन्नुपर्छ । आवाज उठाइदिनुपर्दछ । केहि समयभित्रै भारतका वटै शाखाहरुमा आफुहरुले पक्कड जमौने दबि पनि पौदेल्को रहेको छ ।
सारमा भन्दा सैद्धांतिक मतभेद भन्दा पनि मोहन बिक्रमको नेत्रित्व शैलिसंग चित्त नबुझेर बिद्रोह गर्नेहरुको संख्या बढ्दो छ । स्मरणिय छ प्रचण्डहरुले पनि 2042 सालमा मोहन बिक्रमबाट टुक़्रिएर गएका थिए । त्यसैगरि नेपालि कम्युनिष्ट आन्दोलनका थुप्रै महारथिहरु मोहन बिक्रमकै चेलाहरु रहेको परिप्रेक्ष्यमा उनको पार्टि भने माथि नजानुमा उनको पार्टि संचालन शैलिलाइ दोष दिनेहरु धेरै रहेका छन ।
(तस्बिर: इन्द्रध्वज क्षेत्रि)
0 thoughts on “ज़नमोर्चा नेपाल फेरि बिभाजित”
The legacy of political parties in Nepal truly stands only when they keep splitting and reuniting.The internal conflict the Front was facing for lastafew months was sure to culminate into today’s scene.Good that Communists are practisingademocratic culture by resenting the unity but the tragedy is that when they realise their divided extremist group is good for nothing especially in the elections, they struggle again to reunite;befooling us all.Say,Commorade Bam Dev,for example. The heads never know the sentiments of their cadres while deciding but they essentially do so when the story is already over.
Nepalese Communists are quixotic,they speak onething and do another.The roots of our shared culture are well established in them.